Tsara Tarehy Isa Ny Farany Manova Ao amin'ny Lahatsary mampiaraka: NPR
Tsara Tarehy Isa Ny Farany Manova Ao amin’ny Lahatsary mampiaraka: NPR
Ailsa Chang mijery ny ankehitriny ny fisondrotry ny karazana Lahatsary mampiaraka — mpifanolo-bodirindrina spoofing. Ireo no mandeha ho azy ireo antso avy amin’ny finday isa izay mijery mahagaga toy izany koa ny mpandray ny finday isa. Eto ny zavatra izay mety ho toa annoyingly mahazatra. Ny cell phone peratra, sy ny maro fa hainy manerana ny lamba mitovy ny faritra kaody sy ny tovona toy ny anao. Noho izany dia naka, ary nahazo anao — telemarketer indray. Izany no mitranga tsy an-kiato ny Ailsa Chang avy amin’ny NPR ny Planeta Vola podcast ity, noho izany izy dia nandeha vao hahalala ny antony. AILSA CHANG, BYLINE: Planeta Vola nanontany ny mpihaino raha toa ka efa nahazo antso avy amin’ny finday isa izay fijery hafahafa tahaka ny finday isa. Ary tao anatin’ny ora iray, ny kaonty Twitter-ny dia mipoaka. CHRIS GALLELO: hazavaiko ny antso. Aho mahita fa avy ny faritra kaody, plus ihany telo voalohany isa. OMAR WILLIAMS: O, ry andriamanitra ô, eny. Ary aho vao iray tokony ho folo minitra alohan’ny hoe, raha ny zava-misy. Hi, izany no Elizabeth avy resorts, blah, blah, blah, blah, blah, yeah (hehy). ALEX NOSTRO: efa efatra samy hafa antso an-telefaonina ao fa valo minitra span ny talata maraina. Aho hoe, ireo rehetra ireo dia manomboka amin’ny ny faritra kaody sy ny telo voalohany namerenana. ELINOR JOHNSON: naka ny finday ka nijery ny mpiantso ID. Ary heveriko fa nahazo nanahiran-tsaina mijery ahy miatrika, satria ny vadiko hoe, izay ny antsony? Ary hoy aho, raha ny fahitàna azy, isika, satria ny maro ao amin’ny readout dia ny nomeraon-telefaonina. CHANG: Chris Galileo, Omar Williams, Alex Notre sy Elion Johnson rehetra niharam-boina inona no antsoina hoe mpiara-belona spoofing. Fa rehefa mpiantso hanafenana ny tena finday isa amin’ny sandoka laharana finday izay manana ny faritra iray ihany ny fehezan-dalàna sy ny tovona toy ny anao. Ny hevitra dia mety ho mora kokoa ny maka satria angamba mieritreritra ianao, io antso io dia mety ho ny mpiara-belona na ny ankizy an-tsekoly, ny olona fantatro.
Ho toa avy any amin’ny faritra fehezan-dalàna, izay no eto Washington, ary avy eo dia ny tovona ireo Blackberries’. Ary fantatro fa zava-misy fa, ianao mahalala, fa angamba tsy nisy olona miantso avy ao amin’ny birao. Fantatro, tsy fantatro, ny ankamaroan ‘ ny olona izay niantso. PAI: Ary indraindray aho, dia mamaly fotsiny ho an’ny milay izany. Ary indro ary, indro, izaho efa nahazo ny fialan-tsasatra amin’ny Marriott. CHANG: Ny antso efa nohariny ka mampitombo i Paoly, izy, dia ny famerenana indroa teo sy ny fanaovana ny ady amin’ny spoolers ny ambony laharam-pahamehana ho an’ny AHITÀNA. Video mampiaraka sy telemarketers dia ny Tsy misy. fitoriana ny sampan-draharaha mahazo avy amin’ny vahoaka. Ny teknolojia vaovao dia nanao spoofing mora kokoa ny manao izany ary sarotra ny mamantatra. Tamin’ny taona lasa, olona nandray ny momba azy. lavitrisa Lahatsary mampiaraka isam-bolana. Nahazo hugely be karama ho an’ny scam mpanakanto. PAI: Ireo toby fiantsoana izay nandry any India tamin’ny taona lasa, ohatra, dia niteraka zavatra toy ny $, isan ‘andro avy amin’ny Amerikana mpanjifa izay, amin’ ny fandraisana ny antso dia naseho toy ny hoe avy ny IRS, dia, mazava ho azy fa natahotra indrindra izy ireo raha zokiolona, na vao haingana mpifindra monina sy ny tahaka ny — sy ireo forking ny vola, na raha toa ka tsy tokony izany. CHANG: Ka lohataona ity, AHITÀNA nanomboka nanadihady mikasika ny fomba aoka finday mitondra andian-tsoratra antso avy amin’ny spoolers. PAI: vitsy ny antony samihafa — ny iray dia, eo ambany AHITÀNA ny fitsipika, mitondra ireo voatery damba amin’ny alalan’ny misy miantso hoe ireo nahazo.
CHANG: fa niova
Ankehitriny, ny finday mitondra dia navela hibahana ny sasany spoofing. Ny vahaolana farany, hoy i Paoly, dia rafitra vaovao fa raha ny marina dia afaka manamarina ny mpiantso. PAI: Misy iray tsy manam-paharoa solon’anarana izay mifandray amin’ny telefaonina isa, raha tsy sitrapony. Ary toy izany koa, rehefa antso apetraka mampiasa ny nomeraon-telefaonina, ny mpandray izany antso afaka manana ny rehetra ny fahatokiana amin’ny fahafantarana fa, OK, izany no nomerika tondro noho izany isa izany. Afaka matoky aho fa tsy izany no scam mpanakanto na olon-kafa izay impersonating ny tompon ‘ ny maro. CHANG: mandritra izany fotoana izany, AHITÀNA dia mampiasa ny tsy dia raitra fomba manohitra ny spoolers. Tsy ela akory izay dia nanolotra an-tsoratra $ tapitrisa tsara manohitra ny lehilahy iray izay voalaza fa mandray vilana tapitrisa Lahatsary niaraka tamin’ny taon-dasa. Ailsa Chang, NPR Vaovao
← Maimaim-poana mba hiresaka
Maimaim-poana niaraka videos - VIDEO MAMPIARAKA →